कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: रामले शंबूक वध गरेको कथा—प्रसङ्ग
रामले शंबूक वध गरेको कथा—प्रसङ्ग
रामचन्द्रले सीता त्याग गरे पछिको कथा हो यो । अश्वमेध यज्ञपछि रामलाई अत्यन्त हर्षित माता कौशल्याले आशीर्वाद दिइन, “पुत्र तिम्रो अश्वमेध यज्ञ सफल भयो, तिमी युग(युगसम्म पनि बाँचिरहौ ।”
त्यही बेला एक ब्राम्हा आफ्ना छोरोको मृत्त शरीर ल्याएर चिच्याउँदै भन्यो, “राम तिमी मेरो छोराको हत्यारो हो । यो मृत्यु हो, हत्या हो र यसको कारण तिमी हौ ।”
यति भनेर ब्राम्हण विद्युत गतिले मृत(शरीरलाई राजप्रसादबाट बाहिर लग्यो ।
यसबारे महामुनि नारदले रामचन्द्रलाई भन्यो, “तिम्रो राज्यमा निश्चय पनि कोही पातकी शूद्रले आफ्नो दास धर्मको त्याग मोक्ष सिद्धिको लागि तपस्या गरिरहेको छ राम”
त्यसपछि शूद्र तपस्वीको खोजका लागि दलबलसहित लागे । बाटोमा एक बृद्ध तपस्वीले अगाडि बढेर रामलाई आशीर्वाद दियो र भन्यो, “राजन्, यो आश्रम महर्षि शंकूकको हो । शंकूक चारै वेद र धर्मशास्त्रहरूको प्रकान्ड पन्डित हुन । हामी सबै उहाँकै छत्रछायाँमा विद्या आर्जन गर्दैछौं ।”
सबैजना शंबूक ऋषिको आश्रमतिर लागे । महर्षि शंबूक त्यसबेला ध्यानावस्थामा थियो । कोलाहल सुनेर शंबूकको आँखा खुल्यो ।
श्रीरामले झट्ट अघि बढेर प्रणाम गरेर भन्यो, “महर्षि, म दशरथ पुत्र राम हुँ । तपाईंको वंश कुन हो ?”
शंबूकले आशीर्वाद दिंदै भन्यो, “राम, मेरो नाम शंबूक हो, म शूद्र हुँ ।”
यति कुरा सुन्ने बित्तिकै श्रीरामले आँखा रातो पार्दै भन्यो, “शूद्र तेरो रगतको प्यास बुझाउनका लागि मेरो यो खड्गले देशको कुनाकाप्चा खोजिसकेको छ । तँ शूद्र भएर पनि तैंले ब्राम्हण बन्ने धृष्टता गरिस् । तैंले मर्यादा उल्लघन गरीस । तेरो अपराध अक्षम्य छ । यति भन्दै रामले खड्ग म्यानबाट निकाल्यो ।
शंबूकले निर्भिक भएर टाउको उठायो । उसको मुखमा अलौकिक तेज थियो । ऊ चकित भएर सोध्यो, “कस्तो अपराध महाराज ?”
श्रीरामले भन्यो, “मूर्ख तैले निर्धारित धर्मको श्रृखलाको तोड्ने साहस गरिस् । तैंले परम्परा र समाज विरुद्ध विद्रोह गरिस् । तैले शूद्रको सेवा धर्म त्यागर द्विज बन्ने जघन्य पाप ग¥यौं । तेरो यो कुकर्मको कारण मेरो राज्यमा ब्राम्हण पुत्र अल्पायुमै मृत्यु भयो । तँ नै ब्राम्हण पुत्रको अल्पायुमै मृत्युको कारण हो । तँ हत्यारो होस्, त्यसैले राजदण्ड अनुसार तँ मृत्युको भागी होस् ।
शंबूकको मुख रक्तवर्ण भयो । अनि गर्जदै भन्यो, “राम, तिम्रो आकृति कस्तो भ्रष्ट हुँदै गइरहेको छ ? मैले देवताहरुको मान्य दशरथपुत्र रामको यस्तो नैतिक पतन हुन्छ भनेर सपनामा पनि नसोचेको र आफ्नो कुकर्मको फल अर्कोलाई लादेर राजदण्डको आदमा तपस्वीहरुको बधको लागि समेत उद्यत हुन्छ भन्ने नसोचेको । ब्राम्हण बालकको अल्पायुमै मृत्युको कारण म होइन, तिमी स्वयं नै हौं, तिम्रो पापकर्म हो ।”
शंबूकले मुनि वशिष्ठतिर हेरेर भन्यो, “तिम्रो पाप कर्म । धर्मकम त्यागेर तिम्रो दरवारको स्वादिष्ट भोजन खान पल्केका यी ब्राम्हण र ऋषिजनले तिमीलाई के बताउँदछ र ? यिनीहरु त अचेतन बाजाहरु जस्तै हुन् ( तिमीले रागमात्र सुरु गर्नुपर्छ अनि यिनीहरुले तिम्रो इच्छानुसार राग अलाप्न थाल्छन् । राम, तिमी धोखा दिंदै बटुवाहरुलाई टोक्ने सर्पजस्तै हौ । तिमीले बालि र सुग्रीवलाई मल्ल युद्ध गराएर वाणले बालिको बध ग¥यौं । तिमी क्षत्रिय भएर पनि क्षत्रि धर्म त्याग ग¥यौं, तर त्यो बेला कोही ब्राम्हणको छोरा मारेन, तर आज वेदशास्त्रको अध्ययन, समाजको दुर्गन्धित अंगको सेवा सुश्रुवा तथा पशुभन्दा पनि तल्लो घुणित घृणित शूद्रहरुको उत्थान गर्ने प्रयासलाई समेत अपराध घोषित गरेर तिमीले मेरो बध गर्न उद्यत भइरहेछौ ? राम तिम्रो खड्गद्वारा मेरो वध भएमा मलाई सीधा स्वर्ग पु¥याउँछ, किनकी म सत्यमा छु र तिमी अधर्म, पाखण्ड, भूmठो मर्यादा र राजदण्डको शक्तिले सोझासिधा पशुपन्क्षीहरुमाथि शिकार खेल्ने एक बाघ हौ । तिम्रो दुई अनाथ बालक छोराहरुलाइ अरुले पालिराखेको छ, के तिमी आफ्ना सन्तानप्रति धर्म पालना गरेका छौ ? पिता भएर तिमीले सन्तानप्रति आपूm धर्मबाट विमुख भयौं ।”
यसपछि श्रीरामले खड्गले शंबूकको टाउको काटिदियो र शंबूकको टाउको भूमिमा प¥यो । अनि महामुनि वशिष्ठको मुखबाट ‘अयोध्यापति महावली रामकी जय’ को उद्घोष भयो ।